IBoeing ilungisa amatyala embambano ayi-MAX kodwa iFlyersRights iyaqhubeka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » IBoeing ilungisa amatyala embambano ayi-MAX kodwa iFlyersRights iyaqhubeka
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IBoeing ilungisa amatyala embambano ayi-MAX kodwa iFlyersRights iyaqhubeka.
Ingozi ye-ET302, kunye nengozi yeLion Air Flight 610, kwisithuba nje seenyanga ezine ngaphambili, yasuba ubomi babantu abangama-357.
I-FlyersRights.org iyaqhubeka nokumangala, ixhaswa ziingcali ezizimeleyo zokhuseleko lokuhamba ngeenqwelomoya.
Injongo yetyala le-FlyersRights kukunyanzela i-FAA ukukhulula iinkcukacha ze-MAX zokulungisa kunye nokuhlolwa kwendiza.
I-FlyersRights.org isimangalo esichasene ne-Boeing iya kuba yenye yeendlela ezimbalwa zokuphumeza inyaniso kunye noxanduva lokuphazamiseka kwe-737 MAX.
I-Boeing iye yawalungisa amatyala ayo embambano nazo zonke ngaphandle ezimbini kwiintsapho zamaxhoba e-Ethiopian Airlines Flight 302 iBoeing 737 MAX kwingozi ngoMatshi 10, 2019. Ingozi ye-ET302, kunye nengozi yeLion Air Flight 610, kwisithuba nje seenyanga ezine ngaphambili. , yasuba ubomi babantu abangama-357.
IFlyersRights.org, nangona kunjalo, iyaqhubeka nokumangalelwa kwayo, ixhaswa ziingcali zokhuseleko ezizimeleyo, ukunyanzelisa i-FAA ukuba ikhulule iinkcukacha zokulungisa i-MAX kunye nokuhlolwa kwendiza. I-FAA, e iBoeing's umyalelo, igcine imfihlo yonke idatha enxulumene ne-MAX phantsi kwebango leemfihlo zorhwebo, nangona i-Boeing kunye ne-FAA izithembiso ezininzi zokungafihli ngokupheleleyo.
iBoeing uye wavuma uxanduva lombuyekezo womonakalo obangelwe kukuntlitheka kwe-Ethiopian Airlines Flight 302, kwaye iintsapho zamaxhoba zisenokulandela umbuyekezo womonakalo e-Illinois. Nangona kunjalo, isivumelwano sivalela umonakalo wesohlwayo, umonakalo obuya kumohlwaya uBoeing ngenxa yokuziphatha kakubi kwaye unokunqanda uBoeing nabanye kwindlela yokuziphatha enjalo kwixesha elizayo.
“Oku kuzinza kuthetha ukuba IFlyersRights.org ukumangalelana iBoeing iya kuba yenye yeendlela ezimbalwa zokuphumeza inyaniso kunye noxanduva lokutshayisa kwe-737 MAX,” utshilo uPaul Hudson, uMongameli weFlyersRights.org. "Ngokunqanda ukufunyanwa kunye nokufakwa kwemali kula matyala embambano ukongeza ekuthinteleni amatyala olwaphulo-mthetho kunye nezohlwayo ezibalulekileyo kwizivumelwano zakhe norhulumente womdibaniso, iBoeing ukuza kuthi ga ngoku ibaleke ngokuqhwatywa nje esihlahleni ngokunxulumene nobukhulu benkampani kunye nobukhulu benkampani. ngobubi bayo.”
Ngokucacileyo, uBoeing unethemba lokukwazi ukunqanda ukubekwa kwe-CEO uDavid Calhoun, owayesakuba yi-CEO uDennis Muilenburg, kunye nabanye abasebenzi. U-Boeing wavuma isivumelwano sokutshutshiswa esirhoxisiweyo kunye neSebe lezoBulungisa ngoJanuwari ka-2021, ehlawula i-244 yezigidi zeerandi kwisohlwayo kodwa engavumanga tyala.